१ सय ५० वर्ष बाँच्न चाहन्थे माइकल ज्याक्सन !
विपन्न तथा असहायलाई मुस्लिम समुदायको सहयोग
महानगरमा आठमहिनामा २० किलोमिटर सडक ग्राभेल
मुख्य पृष्ठकला मनोरञ्जन रोचक रमाइलो१ सय ५० वर्ष बाँच्न चाहन्थे माइकल ज्याक्सन !
एजेन्सी, २२ पुस । धेरैजसो मानिसलाई आफू धेरै वर्षसम्म बाँच्न पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । यस विषयमा वैज्ञानिकहरूले पनि विभिन्न रिसर्चहरू गर्दै आएका छन् । तर, त्यस्तो कुनै पनि सफल भने भएका छैनन् ।
त्यस्तै, अमेरिकाका पप स्टार माइकल ज्याक्सनलाई पनि १ सय ५० वर्ष बाँच्न मन थियो । तर, उनको मृत्यु ५० वर्षको उमेरमा हुन गयो । उनले आफूलाई धेरै जीवित र स्वास्थ्य राख्नका लागि विभिन्न उपायहरू अपनाएका थिए । उनले कसैसँग पनि हात मिलाउन वा छुनका लागि पञ्जा लगाउने, र अनुहार बचाउनका लागि मास्क लगाउने गर्थे ।
उनले आफ्नो घरमा १२ जना निजी डाक्टर राखेका थिए । ति डाक्टरले दैनिक रूपमा उनको कपालदेखि नङसम्म जाँच गर्ने गर्थे । उनले खाने खाना खानुअघि ल्याबमा परीक्षण गरिन्थ्यो । अरू १५ जना उनको दैनिक दिनचर्या सहजीकरणका लागि तथा व्यायाम गराउनका लागि नियुक्त गरिएको थियो ।
उनी १ सय ५० वर्ष बाँच्ने प्रक्रियामा थिए । उनको ओच्छ्यानमा अक्सिजन नियमित गर्ने प्रविधि जडान गरिएको थियो । शरीरका अङ्गदाताहरू आवश्यक पर्नेबित्तिकै दान गर्न तम्तयार पारिएका थिए । ती दाताहरूको खानपान हेरविचार आफैंले गर्ने बन्दोबस्त समेत मिलाएका थिए । तर, २५ जुन, २००९ को दिन ५० वर्षको उमेरमा उनको मुटुले काम गर्न छोड्यो ।
उनले आफ्ना घरमा राखेका १२ जनाका डाक्टरले ज्यान बचाउन नसकेपछि अलावा क्यालिफोर्निया र लस एन्जल्सबाट झिकाइएका डाक्टरहरूको अथक प्रयास पनि काम लागेन । माइकल ज्याक्सनले पछिल्लो २५ वर्षसम्म डाक्टरको सल्लाहविना एक पाइला पनि चालेका थिएनन । यतिसम्म गर्दा पनि उनले १ सय ५० वर्ष बाँच्ने आफ्नो सपना पूरा गर्न सकेनन् ।
उनको देहान्त भएको दिन विकिपीडिया, ट्वीटर, एएलओज इन्सट्यान्ट मेसेन्जरले काम गर्न छोडेको थियो । गुगलमा एकैपटक ८० लाख मानिसले उनको खोजी गरेकाले ट्राफिक जाम भएका कारण २ घण्टा ३० मिनेट गुगल चल्न सकेको थिएन । उनले मृत्युलाई चुनौती दिन चाहन्थे तर, मृत्युले उनलाई नै चुनौती दियो । – एजेन्सीको सहयोगमा